Hoy ny Sal. 96:9 hoe: "Miankohofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fihaingoana masina; Mangovita eo anatrehany, ry tany rehetra." Ahoana no fahazoantsika ny hoe: "Fihaingoana masina"? Inona no tokony ho hevitr'izany ho an'ny Kristianina? Tokony hisy akony eo amin'ny fampianarantsika mikasika ny zavakanto sy ny hatsaran-tarehy izany, izay matetika ampifandraisina amin'io andian-teny io; amin'ny fomba ahoana?
Na lazaina aza fa miankina amin'ny maso mijery ny fahatsaran-tarehy, dia tsy azontsika hadinoina ity: Iza ilay nahary ny maso hatrany am-piandohana? (Jereo ny Ohab. 20:12). Na dia tokony hitandrina aza isika. mba tsy hivavaka amin'ny zavaboary (jereo ny lesona omaly), dia afaka mianatra ny momba an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hakanton'ny voary isika, indrindra ny fitiavany ny tsara. Raha hitantsika fa mbola mitafy hatsaran-tarehy hatrany ity tontolontsika lavo ity, iza re no mety hahazo an-tsaina ny hakantony talohan'ny Fahalavoana e?
Araka izany, ny fianarana momba ny haikanto sy ny siansa dia afaka ary tokony hampanakaiky antsika bebe kokoa amin'ny fon'Andriamanitra. Koa satria anisan'ny asan-tanana kanto nataon'Andriamanitra isika, ary koa zava-mahatalanjona ara-tsiansa, dia azontsika ianarana misimisy kokoa ny maha-isika antsika ao amin'i Kristy.
"Tian'Andriamanitra raha ny zanany rehetra no hankasitraka ny asany, ka hifaly amin'ny hatsaran-tarehy tsotra sady milamina, izay nentiny nandravaka ity tany onenantsika ity. Mpitia ny tsara tarehy izy, ary tia ny tsara tarehy ara-panahy, mihoatra noho izay rehetra. madera ivelany fotsiny. Tiany raha kolokolointsika ny fahadiovana sy ny fahatsorana, dia ireo endrika mahafinaritra sy milamina ananan'ny voninkazo" - DHK, t. 97.
Vakio ny Gen. 3:6. Inona no ampianarin'izany antsika mikasika ny hatsaran-tarehy izay tsy voatery ho tsara na masina?
Manana fahavalo isika, izay manimba sy manararaotra izany, dia tahaka ny ataony amin'ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra ihany. Tsy tokony hahagaga ary raha toa ka azo ampiasaina ho amin'ny tanjona tsy mahasoa antsika ny hatsaran-tarehy sy ireo hevitra manodidina izany. Noho izany, ny fanabeazana kristianina ara-Baiboly, indrindra ny mikasika ny haikanto, dia tokony hanampy antsika hahay hitandrina ny amin'ny fahazoana ilay hevitra hoe: tsy voatery ho tsara na masina avokoa tsy akory izay rehetra manana hatsaran-tarehy.
Mitanisa zavatra vitsivitsy, izay "tsara tarehy" kanefa tsy voatery ho masina sy tsara, na koa zavatra tsara tarehy kanefa azo ampiasaina amin'ny ratsy sy manjary tsy masina, araka ny toe-java-miseho. Inona ny fitsipika ampiasaintsika mba hahaizantsika manavaka izany?